Sawir geesoole leh jihooyin iyo masaafooyin ka fog Excel illaa Microstation - Geofumadas
Oktoobar, 2011 Downloads, Microstation-Bentley, topografia
Dhowr sano ka hor waxaan daabacay maqaal muujinaya sida loo wadaago xogta Excel si ay u dhisto mashaqo leh AutoCAD, iyada oo aan laheyn in la sameeyo qormada oo dhan:
Maalintii kale ee aan ku jirnay koorsada AutoCAD qof ayaa i weydiiyay haddii taas lagu samayn karo khadka amarka Microsation. Jawaabtu waa HAA, waa inaad fahamtaa oo kaliya in Microstation's Keyin uusan la mid ahayn khadka amarka AutoCAD. Aynu aragno sida loo dhisi karo, markaan gudubno waxaan barannaa waxyaabo yaryar oo aad loogu isticmaalay barnaamijkan:
Jadwalka dhinaca midigta ayaa tusaale u ah tikidhka ku salaysan tilmaamaha iyo masaafada.
Iyadoo Microstation waxaad ku qaadi kartaa tan sida aan hore u sharxay, oo leh khasaare khaas ah - iyo mid ka mid ah AutoCAD -, in ay tahay mid aad u adag in la qoro hal mid, suurtogalnimada in uu qalad yahay iyo xitaa in koorsadii hore aysan dib u noqon.
Waa hagaag, habka isdhaafka waa isku mid taas oo aan ku sharaxay AutoCAD, kaliya waa inaad fahantaa wax Microstation ka duwan yahay.
Keyin looma dhisin iyadoo lagu saleynayo sameynta amarro khadadka qoraalka laakiin loogu yeerayo amarrada jihaynta shayga, sidaa darteed waxay kaliya taageertaa 56 xaraf Intaa waxaa sii dheer, waxay u baahan tahay in semicolon (;) loo adeegsado in lagu kala saaro amarrada maxaa yeelay, si ka duwan AutoCAD, oo ka timaadda caqli-galnimada aasaasiga ah, waxay keenaysaa caqli-gal Clipper ah oo wixii Microstation halkaas lagu sameeyay markii waxaa weli loo yaqaan 'Ustation'.
Marka tan la helo, habka ugu fudud ayaa ah in amarrada laga soo waco feyl qoraal ah oo ku jira @ amarka, oo aan u maleynayo in dad aad u tiro yar ay yaqaanaan laakiin waa kan nidaamka Microstation had iyo jeer loo isticmaalo in lagu farsameeyo amarrada dufcadda. Oo ay ka mid yihiin dhibcaha ka soo dejiso liistada txt waa mdl oo sidaas yeela.
Isticmaalida xaashida Excel ee aan hore u soo shaqeeyay si aan u baro sida loo beddelo ka soo jiidashada iyo meelaha fogaanaya, waxaan ku tusi doonaa sida ay udhacday Microstation:
Isku duwo qodobbada.
Maxaa daneynaya in ugu dambeyntii ah Furaha final waa:
meel dhibic ah ;xy =374037.736,1580735.145;
Meesha dhibic waa amarka barta, oo ay kujirto booska, semicolon waa inuu muujiyo amar kale, xy = waa amarka lagu galayo iskudhafka iyo labada iskuduwaha buluug iyo cagaar waa qodobbada la yaqaan. Dhamaadka semicolon cusub si loo muujiyo a geli ama talaabo cusub u qaado.
Sidaas, marka la eego unugyada xiisadayda waxay ku jiraan U7 iyo V7 si ay u-dhameeyaan:
= XUSUUSNOW («meel dhibic ah ; »,»xy =«U7, »,,,V7, »;»)
Sidan oo kale, waxaan kaliya oo aan koobi doonaa waxyaabaha ku jira column AA faylka shtakiga ah, kaas oo aan wici doono Rikoodhadhka 2.txt. Waxaan u soo jeedinayaa inay si toos ah u dhigaan C markaa wadadu sidaa uma dhib badna.
Xaaladdan waxaan ku qorayaa dukumiintayda, waddadu waxay noqon doontaa: C: \_ Users \_ User \_ Documents \_ pointsandfumed2.txt
si aan u ordo, waxaanu u hawlgalnaa daaqada taliska (furaha), tan waxaa laga sameeyaa Adeegyada> fure u ah kadibna geli amarka:
Waxaan galnaa Gelitaan, halkaasna waad ku haysataa, dhibcaha lagu soo saaray sida ay u kala horreeyaan. Way ku habboon tahay in loo helo dhumuc dhumuc dhumuc weyn oo iyaga ah si loo soo bandhigo.
Taas awgeed, howlgalku waa isku mid, amarka waa in aan fulino waa xariiqda booska, marka lagu daro waxaan tilmaameynaa in khadka uu leeyahay asal iyo astaan ​​u ah meesha.
xariiqda booska ;xy =374032.234,1580716.255;xy =374037.736,1580735.145;
= XUSUUSNOW («xariiqda booska ; »,»xy =«, U6,», », V6,»; »,»xy =«, U7,», », V7,»; »)
Waxaan nuquleynaa oo ku dhajineynaa feylka txt, keydso oo mar kale ordo
Faa'iido dheeraad ah waa in la dhiso sanduuqyada rikoodhada iyo masaafooyinka oo kaliya waxay u baahan yihiin inay sameeyaan Copy Excel, iyo dhoobo gudaha Microstation. Ku dhaji khaaska ah waxaad dooran kartaa inta udhaxeysa inaad ahaato sawir, warqad gundhig ah ama ku lifaaqan
Si loo dhamaystiro maqaalkan, Waxaan qabanayaa faylka tusaalaha ee Excel, taas oo ay tahay inay kaliya bedelaan asalka asalka, jihooyinka iyo masaafada iyo mawduuca waxay faa'iido u noqon kartaa Iana kasta oo ka badan kala badh rodol oo feedh. Sidoo kale halkan sambalka.
Post Previous" Hore Microstation V8i - Sida loo kiciyo liisanka
Post Next Geomap iyo isku xirka khariidadaha GoogleNext »
14 Jawaab ah "Sawir geesoole leh shaashado iyo masaafoyinka laga soo bilaabo Excel ilaa Microstation"
Ii soo dir tusaale fayl ah iyo waxa aad ku rabto barnaamijka editor@geofumadas.com
Mihkel isagu wuxuu leeyahay:
Kas teie Trimble iyo PowerDraft vaheline expot / soo dejiso ja koodide mkm programmi teete?
Nacho Vergara Galiano isagu wuxuu leeyahay:
isagu ma ii ogolaanayo inaan sameeyo, Microstation wuxuu ii sheegaa amarka talada macmiilka
hello !!! saaxiibadood ayaa doonay inay weydiistaan, waxaan u baahanahay barnaamijka 2015.el autocad 6 ama haddii aad igu fududeyn kartid intars.grasias.
Ku shaqeeyso nooc kasta oo ah AutoCAD
migaafiya isagu wuxuu leeyahay:
Qofkasta ma ii sheegi karaa haddii mawduuca dheeraadka ah ee lagu sawirayo geeso badan oo leh autocad, ay ku habboon tahay nooc kasta oo ah autocad ama 3d madani?
Saaxiib qaali ah, waxaan helay feylka aan codsaday, mahadsanid aad u badan !!
Waxaa ku yaala boostadaada, hubi faylka spam, mararka qaarkood waxay halkaas tagtaa.
Haddii ay dhibaato kaa haysato, noo sheeg
Messrs lacagta aad by Pay Pal laakiin ma heli karo habka i siinta ii soo rogo faylka Excel ee microstation
Waxaa jira nidaamyo qadar ah kuwaas oo tan ku sameeya AutoCAD.
Sideen u sameyn karaa si aad uguyaraan waxoogaa reebitaan ah, iigu soo dir email ahaan, waxaa jira dad ay aad ugu adagtahay helitaankiisa iyaga oo bixinaya… .mahadsanid waana ku faraxsanahay …… jaime
Boggaga internet-ka ee ku jira downloadska waxaa ku yaal waraaqo kuu ogolaanaya in aad dhibcaha ka qaadatid iskudhafyada ee Excel
CARLOS Gomez isagu wuxuu leeyahay:
HELLO SIDEE AYEY COMBIERTO UGU SHAQEYSAA MACLUUMAADKA EXCEL OO LAGU SAMEEYO MAGACA KOOBKA OO AY KA SAMAYSAAN MUTANKA AUTOCAD MIO WA 2007 THANKS
rivas guul ah isagu wuxuu leeyahay:
sidoo kale autocad waxaad kuheli kartaa mdl ………… ..